Imerintsiatosika : Zaza iray matin’ny lozam-pifamoivoizana -
AccueilSongandinaImerintsiatosika : Zaza iray matin’ny lozam-pifamoivoizana
Nitera-doza indray ny fiara fanaovana hazakazaka. Nisehoana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina tsy dia fahita firy eto an-drenivohitra indray teny Angaro kaominina Imerintsiatosika omaly alahady tolakandro . Fiara iray nitondra olona izay nahitana telo mianaka no indray nifatratra tamin’ny tranon’olona mipetraka amoron-dalana. Tokony ho tamin’ny 3ora sy sasany teo no nitrangan’ny loza. Zazakely iray no namoy ny ainy nandritry ny fifandonana tamin’izany. Mafy ny fifandonana ka naratra mafy avokoa izy telo mianaka ireo, ary nentina haingana teny amin’ny hopitaly Imerintsiatosika , raha nisy fahasimbana ihany koa ny trano izay nifatraran’ny fiara. Araka ny fampitam-baovao no nahazoana tatitra fa olona avy nanatanteraka Open, na koa ireny fifaninanana hazakazaka fiara ireny izy ireto, izao tra-doza izao.
Handeha hamonjy fodiana izy ireo taorian’izay, ka tsy fantatra izay nanjo ny fiara. Tsy nahatana ny hisatry ny fiara intsony ny mpamily, ka avy hatrany dia nidona mafy tamin’ny trano tao Angaro. Tsy fantatra ihany koa araka izany izay tena nahazo ity farany raha ny loharanom-baovao, fa tampoka no nahitana ny fiara efa nivilivily, ary nidona tamin’ny trano biriky teo amoron-dalana. Raha ny fantatra ihany dia voalaza fa fiara avy nanatanteraka fifaninanana hazakazaka fiara, ity fiara iray niharan-doza ity. Tsy nisy ihany koa ankoatra izay ny aina nafoy tao amin’ilay trano voadona. Fotoana vitsivitsy izay nahatongavan’izy telo mianaka tany amin’ny mpitsabo dia maty ilay zaza. Tsy tana intsony araka izany ny ainy noho izy mbola marefo dia marefo nefa betsaka ny rà very tao aminy, ka nitarika ny fahafatesany. Mbola manaraka fitsaboana ihany koa izy mivady ray aman-drenin’ny zaza taorian’ny voina nahazo azy ireo.